अन्तर्राष्ट्रिय Archives - Page2of 6
साथीसँग नाच्न नमानेको भन्दै श्रीमती माथि चरम यातना ! नग्न बनाएर साथीकै अगाडी यस्तो बर्बरता !
चैत २३, २०७५ बिगुल
लाहोर । पाकिस्तानकी एक महिलाले आफ्ना पतिले उनी र उनका साथीसँग नाच्न नमानेको भनेर कुटपिट गर्नुका साथै कपाल खौरिदिएको आरोप लगाएकी छन् । यो घटनाले गर्दा पाकिस्तानमा महिलाको सुरक्षाका बारेमा …
दक्षिण कोरियामा भीषण डढेलो ! राष्ट्रिय प्रकोप घोषणा !
चैत २२, २०७५ बिगुल
सोल, दक्षिण कोरियाली सरकारले शुक्रबार राष्ट्रिय प्रकोपको घोषणा गरेको छ । देशको उत्तरपूर्वी तटीय क्षेत्रका पाँच ओटा शहरमा लागेको भीषण डढेलोपछि एक व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य ११ जना घाइते …
अमेरिकाको टेक्सासमा व्यापक ‘सर्चअप्रेसन’ : २८० जना आप्रवासी गिरफ्तार !
चैत २१, २०७५ रासस
डल्लास, – अमेरिकाका टेक्सास राज्यमा सञ्चालित एक प्रविधि कम्पनीमा कार्यरत २८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीहरुले गिरफ्तार गरेका छन् । एक दशकयता अमेरिकी इतिहासमै कुनै कम्पनीबाट यतिठूलो संख्यामा कामदारहरु …
खचाखच यात्रुले भरिएको बसमा भिषण आगलागी ! बसभित्रै जलेर २० जनाको मृत्यु !
चैत १८, २०७५ रासस
लिमा, पेरुको राजधानी लिमामा आइतबार अबेर राती एउटा बसमा भएको आगलागीमा परी कम्तीमा २० व्यक्तिको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएको छ । लामो बाटोमा चल्ने यो बस लिमाबाट चिक्लायोतर्फ …
राहुल गान्धी दुई ठाउँबाट चुनाव लड्ने ! गान्धी डराएको भाजपाको आरोप !
चैत १७, २०७५ रासस
नयाँ दिल्ली – भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका वरिष्ट नेता एके एन्टोनीले पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धी दुई ठाउँबाट निर्वाचन लड्ने बताउनुभएको छ । केरलाको वायानाड निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि गान्धीले लोकसभाका लागि प्रतिस्पर्धा …
भारतीय सेनालाई ठूलो घाटा ! फेरी अर्को लडाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त !
जोधपुर, भारतीय वायुसेनाको एउटा मिग–२७ लडाकू विमान राजस्थानको जोधपुरमा आइतबार विहान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । नियमित उडानका क्रममा रहेको उक्त विमानका पाइलट भने सकुशल उत्रिएको भारतीय सेनाले जनाएको छ । …
विद्यालयमा तोप आक्रमण : चार विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृत्यु, १७ घाइते !
चैत १६, २०७५ रासस
गाज्नी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको एक विद्यालयमा तोप आक्रमण भएको छ । शनिबार गाजनी प्रान्त अन्तर्गत आन्दर जिल्लाको ग्रामिण इलाकामा रहेको विद्यालयमा भएको आक्रमणमा चार विद्यार्थीको घटनास्थलमा नै मृत्यु …
हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा १३ जनाको मृत्यु ! घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रपतिको आदेश !
चैत १४, २०७५ रासस
अल्माटी – कजाखस्तानको दक्षिण पश्चिममा सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा १३ जना सैनिकको मृत्यु भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बुधबार रुसमा निर्मित एमआई–८ हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । …
४० जवानको मृत्यु हुनेगरी काश्मिरमा भएको हमलाबारे पाकिस्तानको यस्तो छ स्पष्टोक्ति !
इस्लामाबाद, पाकिस्तानमा हालैका दिनहरुमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुसँग भारत नियन्त्रित काश्मिरको पुलवामामा गत महिना भएको आत्मघाती आक्रमणबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको पाकिस्तान सरकारले जनाएको छ । उक्त आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानी अधिकारीहरुलाई शंकास्पद …
ट्रम्प मिडियाहरुसँग कड्किए ! सञ्चारमाध्यम जनताका शत्रु र वास्तविक प्रतिपक्षी दल भएको दाबि !
चैत १२, २०७५ रासस
वासिङ्टन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार मुल धारको सञ्चारमाध्यमलाई ‘शत्रु’ र ‘प्रतिपक्षी दल’ को सज्ञा दिनुभएको छ । ट्रम्पको निर्वाचन अभियानमा रूसी साँठगाँठबारे वर्तमान् राष्ट्रपतिमाथि लागेको आरोपको छानविन गरी हालै …